प्रधानमन्त्री देउवादेखि प्रचण्डसम्म पुगे भारतीय दूतावास: तर किन गएनन् ओली ?
माघ १२, २०७४ BNNTV
काठमाडौं । शुक्रबार भारतको ६९ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा आयोजित एक चियापानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनसहित अन्य मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रेहको थियो ।
तर, भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी भएनन्। भारतीय दुतावास लाजिम्पाटमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, बलिउड अभिनेत्री मनिसा कोइराला लगायतका अन्य नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी भएनन् । ओली सामुदायिक रेडियोहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा पुगेकाले चियापानमा सहभागी भएनन् ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पूरीले सहभागीलाई स्वागत गरेका थिए ।
प्रकाशित : शुक्रबार, माघ १२, २०७४१७:५८
तीसवर्षीय सेवावधि खारेज गर्न निवेदन
तस्विरमा हेर्नुहोस दिपिका र रणवीरको रोयल लुक, दिए दोश्रो शानदार पार्टी!
अँध्यारो हुँदा स्वचालित रूपमा बल्ने र उज्यालो हुँदा आफैँ निभ्ने बत्ती जडान शुरु
राज्य संयन्त्र कमिसनको खेलमा लिप्त भयो भन्दै विप्लव माओवादीद्वारा अवैध खानी बन्द गर्न आग्रह !
घडेरी खार्दा ढिस्कोले पुरिएर महिलाको मृत्यु
घाँस काट्दा हात छिनियो